Anyị na-enyere ụwa aka ito kemgbe 1991
Kpọọ Nkwado 0086-15763807215 0086-535 6856565
Email Nkwado xsb@ytsc.cn 805870329@qq.com
Rubber ntekwasa Metal Ihe
Usoro mgbochi mkpọtụ
Abutment Clip Usoro
Non Asbestos gasket Ihe
Usoro QF Hi-Q
FBYS Usoro ego dị irè
Ekpo ọkụ ire: Rubber ntekwasa metal
Anyị guzobere ngalaba na-ekpuchi roba na 2005, n'otu afọ ahụ, anyị na-ebubata isi ihe ndị si na France, Germany na Japan. Na 2011, ụlọ ọrụ ihe ịga nke ọma mepụtara roba ntekwasa metal mejupụtara osisi na China, na guzosie ike mbụ akpaghị aka roba ntekwasa metal coils p ...
NA-agafe ỌR FI ỌR OF ỌR OF nke API STANDARD 6FB
site ha na 21-03-31
Ọ bụ nnukwu ọganiihu maka ụdị ụdị ngwaahịa na-abụghị asbestos iji gafee ule ọkụ nke API Standard 6FB, Nke anọ, 2019 na ụbọchị Machị 5, 2021. Ọ bụ Yarmouth Research and Technology, LLC mere ule ahụ, nke bụ ikike. na ọkachamara nyocha ụlọ ọkụ na ụwa. Nke ...
ỌR SE AKWPKWỌ AHPRAL AKW ,KWỌ, ALLdị niile nke ihe akara akara
site ha na 21-03-23
Ihe akàrà bụ ihe kacha mkpa iji chebe ma dịkwa mma na ndụ ọgbara ọhụụ n'ụwa niile. Anyị osisi bụ gasket ihe na-emeputa ihe na-abụghị asbestos eriri mpempe akwụkwọ ụdị na roba ntekwasa metal ụdị. Anyị nwere ogologo akụkọ ihe mere eme nke imepụta na imepụta akàrà akàrà kemgbe 1991. Ugbu a, anyị bụ ndị famou ...
Anyị mepụtara ọhụrụ ọkpụrụkpụ mkpuchi mkpuchi roba ntecha ọla
site ha na 21-03-17
Nnukwu ihe mkpuchi roba nke roba mejupụtara metal mejupụtara na-adabere na efere oyi na-atụgharị na NBR roba mkpuchi n'akụkụ abụọ site na teknụzụ nhazi dị elu. O kwesịrị ekwesị ka ujo absorption shims, mkpọtụ damping shims, vibration damper maka breeki usoro na mmiri ngwa, wdg Ọ '...
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na agbajiri isi gasị
site ha na 21-01-14
Igwe injinị isi nke gas na-ere ọkụ na mkpakọ sistemụ ikuku na-abụkarị ọdịda. Cilinda isi gasket Burns ga-akwa njọ na-arụ ọrụ ọnọdụ nke engine, ma ọ bụ ọbụna na-arụ ọrụ, na nwere ike imebi ihe ụfọdụ metụtara akụkụ ma ọ bụ akụkụ; na mkpakọ na ike strok ...
Ihe ị ga-ege ntị mgbe ị na-etinye gasket isi cylinder
1. Incompressibility Sịntetik roba nwere ike ịgbanwe ọdịdị ya dịka mmiri mmiri. N'ezie, ọ gaghị asọpụta. Mgbe ike mkpagide nke na-eme ka nrụrụ ya kwụsị, ọ nwere ike ịlaghachi n'ụdị mbụ ya (ya bụ, olu nke gasket anaghị agbanwe n'oge usoro mkpakọ. Gbanwee, ...
Gịnị na-eme ma ọ bụrụ na e nwere nsogbu na engine cylinder isi gasket
Mgbe isi gasị na-emebi ma ọ bụ na-ejichighị ya ike, injin ahụ enweghị ike ịrụ ọrụ ọfụma ma a ga-edochi ya ozugbo. Usoro ndị a kapịrị ọnụ bụ ndị a: 1. Wepu mkpuchi valvụ na gasket. 2. Wepu ogwe aka nke ogwe aka ma wepu mkpanaka valve. 3. Nke nta nke nta esighi ike loosen a ...
Ọtụtụ okwu chọrọ nlebara anya na ntinye nke gaskets
The gasket bụ static akara akụkụ na dozie "na-agba ọsọ, emit, dripping, na-ehi ehi". Ebe ọ bụ na e nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ akara akara, dị ka ụdị akara akara ndị a si dị, gasketị dị larịị, gaskets elliptical, gaskets lens, gaskets cone, gaskets mmiri mmiri, O-yiri mgbaaka, na ọtụtụ onwe -...
Performance mgbe cylinder isi gasket ọdịda
Ọ bụrụ na ụgbọ ala ahụ mebie mgbe ọ na-akwọ ụgbọala, e nwere ọtụtụ ihe kpatara ọdịda ahụ, akụkụ ọ bụla nwere ike ịda. Kedu ihe ga-eme ọdịda isi gasị? Ọnọdụ zuru ezu ka onye nrụpụta anyị ga-enye gị. Ka m webata ya. N'ihi na gasket cylinder nwere ọrụ nke sealin ...
Esi ekpe ikpe na-cylinder isi gasket edifọp
Isi ọrụ nke gasket cylinder bụ iji jigide mmetụta akara ahụ ogologo oge na ntụkwasị obi. Ọ ga-enwerịrị ike ikpuchi nnukwu okpomọkụ na gas dị elu na -emepụta na cylinder, ga-emechi mmiri dị jụụ na mmanụ injinia site na nrụgide ụfọdụ na ọnụọgụ na-abanye na ...
Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na nsogbu dị na isi gasị cylinder
Mgbe isi gasị na-emebi ma ọ bụ na-ejichighị ya ike, injin ahụ enweghị ike ịrụ ọrụ ọfụma ma a ga-edochi ya ozugbo. Usoro ndị a kapịrị ọnụ bụ ndị a: 1. Wepu mkpuchi valvụ na gasket. 2. Wepu ogwe aka nke ogwe aka ma wepu mkpanaka valve. 3. Tọpụ onwe m na wepụ ...
The ụlọ ọrụ na-amịkọrọ mba elu imewe nkà ihe ọmụma na nhazi usoro na-eme ka mbụ ọhụrụ.
ỌR SE AKWPKWỌ AHALR SOL AH SOL, ,dị NILE ...
23,03,21June 16, 2017
Anyị mepụtara ọhụrụ ọkpụrụkpụ mkpuchi mkpuchi RU ...
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na isi isi cylinder ahụ ...
14,01,21June 16, 2017
Non Asbestos gasket mpempe akwụkwọ, Non Asbestos Rubber mpempe akwụkwọ,